Android application တွေကို fullversion ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်LuckyPatcher ဆော့ဖ်ဝဲ လေးတစ်ခုပါ။ တချို့သောAndroid apk တွေဟာဆိုရင်"လိုင်စင်ကီး"တောင်းတာတို့ဝယ်ခိုင်းတာတို့ ပြီးတော့မျက်စိနောက်စရာကြော်ငြာတွေပါနေတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့apkတွေကိုအခုဒီsoftwareလေးကFull Versionဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါလ်ိမ့်မယ်။Android apk တွေကို လိုင်စင်ကီးတောင်းရင် ဒါလေးနဲ့ ထပ်မတောင်းတော့အောင် ဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ်​။ဒါ့အပြင် Google Ads ဖြုတ်တာတို့ License Verfication ဖြုတ်တာတို့မှာပါတော်တော်အဆင်ပြေစေပါတယ်။android apk တွေကို full version ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ လို့တောင်မှနာမည်ကြီးပါတယ်။အဲ တခုရှိတာက ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဖုန်းဟာRooted ဖြစ်ထားရပါမယ်Root ဖြစ်ပြီးသားဖုန်းတွေပဲအသုံးပြုလို့ရမှာပါ။ apk file size 3.7 MB လောက်ပဲရှိပြီး androidversion2.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/29/2017 05:34:00 am0comments
SP Flashtool New Version 2017 (MTK Flash Tool MOD)
Deadboot ဖုန်း​တွေကို​တောင်​ Flash ​ပေးနိုင်​တယ်​လို့ ဆိုထားပါတယ်​..။ စိတ်​ဝင်​စားရင်​ စမ်းသပ်​ကြည့်​နိုင်​ကြပါတယ်​ခင်​မျာ။
Download SP Flashtool New Version 2017
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/29/2017 05:32:00 am0comments
MiUi MINI FLASHER
Mi ဖုန်းတွေအတွက် MiUi MINI FLASHER Tool.
1. Download and install setup-MiNi_FLASHER_3.0.exe
2. Download Global ROM 8.1.1.0 and extract it. In my case, it will be
3. Open MiNi FLASHER, Run as Administrator, and choose "FLASH FASTBOOT ROM"
4. Power off your device, and then press and hold Vol-Down and Power Button to go to Fastboot Mode, and then click "NEXT"
5. Choose "SELECT" and then browse to your fastboot rom.
example : "D:\_Your_Rom" NOT "D:\_Your_Rom\_images"
in my case : "D:\_Android\_Redmi 3S\_land_global_images_V8.1.1.0.MALMIDI_20161108.0000.00_6.0_global"
Ignore the "space", I'm using the short path instead.
6. Choose your option, in my case I choose "Flash All Except Data Storage"
7. Click "FLASH", and then ROM's Information will show up, choose "Yes"
8. In the end of Flashing, app will ask "reboot confirmation", choose "Yes", and then "CLOSE"
9. Youi device will reboot and please wait until it done.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/29/2017 05:31:00 am0comments
Mi ဖုန်းအားလုံး မြန်မာဖောင့် ထည့်မယ် TTA Mi Font Lite 1.3 ( စက်ပိတ်သွားလဲဖောင့်မပျောက် )
TTA Mi Font Lite 1.3 ( စက်ပိတ်သွားလဲဖောင့်မပျောက် )
၁။ ဖောင့်ဒီဇိုင်း (၃၅) မျိုးပါဝင်ပါတယ် မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ချိန်းနိုင်ပါပြီ
၂။ ဖောင့် ချိန်းနည်းသေချာမသိပါက "အကူအညီ" မှတဆင့် ဖောင့်ချိန်းနည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၃။ "အကူအညီ" ခလုတ်တွင်
China လား Global လားခွဲခြားနည်း
Facebook Link မြန်မာစာ မှန်အောင်ချိန်နည်း
Theme Clean ခလုတ်
Android Version အလိုက် Google App / Playstore ထည့်သွင်းနည်းများ
UC MINI Browser နှင့် Frozen Keyboard App ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ခလုတ်များပါဝင်ပါသည်။
၄။ Beta 7.11. ကျော်တင်ထားသူမိတ်ဆွေများအတွက် တရုတ်စာနဲ့ (china beta) ဟုပါသော ဖောင့်တခုစမ်းသပ်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်အဆင်ပြေလျှင် ထပ်တိုးပေးသွားပါမယ်။
၅။ ဖောင့်များပို့ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများ နှင့် Font Developer များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Credit လဲပေးပါတယ်။
အောင်မှ အဆင်ပြေရာ Link များ တွင် Download လုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ <3
Playstore @ https://play.google.com/store/apps/details?id=tta.mifont.lite
Zippyshare @ http://www46.zippyshare.com/v/cVqhppwo/file.html
Apkpure @ https://apkpure.com/tta-mi-font-lite/tta.mifont.lite
Developed by Than Toe Aung
Posted in: Android Myanmar Font, mi, Xiaomi
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/29/2017 05:28:00 am 1 comments
MS TOOLS V.3.1 (Latest Version)
MS TOOLS V.3.1 (Latest Version) ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ...။
Reboot and delete data directly from the Recycled Routine
Reactivation and activation of the intestines of samsung
Enter the refresh mode
Login to PasteBut mode
Login to EDL Mode for Koala Com Devices
Show style without format
Delete all passwords, pattern and lock the screen once
Install the Busybox files
Change the application installation area to external memory
Change the application installation area to internal memory
Activation of precursors for QUALCOMM devices
(LS740 - LS660 - LS620 - LS665 - LS770 - LS751 - LS970) Powered by:
Activation of intestines for all geological devices (routine needs)
Dependency of some of the devices without the need foraroutine
Get out of the Don Lod mode
Formation of the machines through the position of the Don Lod (repaired)
Delete the pattern via the DownLoad mode (has been repaired)
ZIP file from any folder
Direct boot from boot.img + recovery.img files
Refreshing file recovery.img
Unzip the boot.img file
Unzip the system.img file
Flashing the radio.img file
Open the botder
Get your htc token code
Write the CID
Remove the FRP to Samsung hardware in three steps (some operations require steps to be taken by the program)
Remove FRP for MOTOROLA devices
Remove FRP for MTK devices
Remove FRP for SPD devices
FASTBOOT MODE FOR QUALCOMM
FRP is available via FastPut for the following devices (LENOVO - XIAOMI - MICROMAX - DEEP - HTC)
Skip the FRP for LG hardware scams via the Down Mode mode
Skip the FRP through the connection hole to the PORT COM port
Obtain the device information through the PORT COM port
Obtain the program number and serial number through the PORT COM port
Routes for all versions of 4.1.2 to 6.0.1 (NT Repair)
Rout has been added to all devices
A special routine has been added to the Kingroot application
A special superuser routine has been added
Special Edition 4.4.2 (Reform)
Routine of old editions.
MS TOOLS V.3.1[21-11-2017]
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/29/2017 05:27:00 am0comments
Mi A1 ဖုန်းများ မြန်မာဖောင့်ထည့်မယ် TTA Mi A1 Font Installer
TTA Mi A1 Font Installer December update (PC)
merry Xmas ပါ christmas အတွက်လက်ဆောင်ဆိုလဲမမှားဘူးပေါ့ Mi A1 Phone ထုတ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့ လော့အလုံးတွေလာတော့မှာကိုတွေးပြီး Userlock နဲ့ FRP ဖြုတ်တာကိုပါထပ်ထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် ခလုတ်လေးတွေကိုလည်း ဇဝေဇဝါမဖြစ်အောင်အောက်မှာပြပေးထားပါတယ်။
*** ( ခလုတ်မှားပြီး ဖုန်း Firmware မတက်တာမျိုးဖြစ်ရင် fastboot mode ဝင်ပြီး December ခလုတ်နှိပ်ပြီး fix နိုင်ပါတယ် ဖုန်းပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်) ***
August update ကနေ Nov update ဖုန်းများအတွက်
Aug Sep Oct Nov ခလုတ်ကိုနှိပ်သွင်းပါ (adb)
December update အတွက်
December ခလုတ်ကိုနှိပ်သွင်းပါ ( adb or fastboot )
Unicode Font အတွက်
PyiDaungSu 2.2 ခလုတ်နှိပ်သွင်းပါ ( adb or fastboot )
Remove Frp ခလုတ်နှိပါ (fastboot mode)
PIN , PT , PW ခလုတ်နှိပ်ပါ (fastboot mode)
၁။ မထည့်ခင် PIN Pattern Password ရှိပါက ဖြုတ်ထားပါ
၂။ Developer Option နှင့် OEM Unlock ON ပြီး ကြိုးချိတ်ပါ
၃။ ဖုန်းပိတ်ပြီးပြန်ပွင့်လာလျှင် မြန်မာစာ 100% မှန်ပါပြီ
Download Tool @ http://www.mediafire.com/?fotfpdu9cgvkmpa
မှတ်ချက် ။ system edit ဖြစ်လို့ system update ota မရနိုင်ပါ
(fastboot adb driver များ မသွင်းရသေးလျှင် အောက်ကလင့်ခ် မှ ဒေါင်းသွင်းပါ)
Created by Than Toe Aung
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/29/2017 05:25:00 am0comments
Emmc အသစ်​လဲတဲ့အချိန်​မှာ Emmc parser software ကို အသုံးပြု ပြီး​တော့ ဘယ်​ phone model က ဘာ emmc IC အမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်သလဲ​​ဆိုတဲ့ စစ်​နည်း​လေးပါ
Credit..by Zaw Win Htut
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/26/2017 11:17:00 pm0comments
eMMC driver ဆိုတာ ဘာလဲ ......?
eMMC အလုပ်​လုပ်​ဖို့အတွက်​ ​ပေးသွင်းထားတဲ့ Volt လမ်း​ကြောင်းတခုပါပဲ .....
သူကဘယ်​လိုအလုပ်​လုပ်​လဲ ဆို​တော့ .....eMMD DC to DC ​လေးလို့​ခေါ်ကြတယ်​ အဲ့ IC ​လေးတလုံးပါတယ်​ .....
အဲ့ DC to DC ​လေးရဲ့ တပင်​​ကို 4.0 volt အဝင်​ တလိုင်းရှိတယ်​ ကျ​နော်​ ပုံမှ ပြထားပါတယ်​ ......
​နောက်​ထပ်​ power IC က​နေ 3.3 volt ​ဝန်းကျင်​ တလိုင်း​ပေးသွင်းထားပါတယ်​ ....
ဟုပ်​ပီ အဲ့ အ​ခြေအ​နေမှာ DC to DC ​လေးကို ခိုင်းတဲ့ Volt နှစ်​လိုင်း ရှိပီ ဆိုရင်​ သူအလုပ်​စလုပ်​ပီ ......
2.8 Volt တလိုင်း ပြန်​ထုပ်​​ပေးပါတယ်​ .....
အဲ့ 2.8 Volt ​လေးဟာ eMMC ရဲ့ pin နံပက်​ န ပင်​ကို ဝင်​သွားပါတယ်​ ....
အဲ့​နေရာ​လေးမှာ Error တခုခု​ကြောင့်​ Volt ​ပျောက်​​နေမယ်​ဆိုရင်​ .......
အဲ့​တော့ eMMC လဲရင်​ အဲ့ ​နေရာ​လေးကို စစ်​သင့်​ပါတယ်​....
စစ်​မယ်​ ဆိုရင်​ Power ခုလုပ်​​လေး ဖိပီး ပ​လော့တံ​လေးနဲ့ VOlt ​လေး​ထောက်​ကြည့်​​ပေါ့ဗျာ 4.0 Volt ​တေ ရှိလား 2.8 Volt ​ရော ပြန်​ထွက်​​ပေးလား....အဲ့တာ​လေး​တွေ စုံ​နေမှ ကျန်​တာ​လေး ဆက်​လုပ်​ .....
ကျ​နော်​ ခုပြထားတာ 610-U00 ပါ ...
သူ့ရဲ့ အဝင်​အထွက်​​တွေကို ပုံ ၃ ပုံနဲ့ တိုက်​ကြည့်​​ပေါ့ဗျာ ....
Pm8029 သုံးထား တဲ့ 8813 လို Moldel မျိုးမှာလဲ ပါပါတယ်​..
​ခု​​နောက်​ပိုင်း...Hi power IC သုံးထားတဲ့ H30-L02 လို moldel ​တွေမှာပဲ ပါလာပါတယ်​ ......
လိုအပ်​တာများရှိရင်​ ကျ​နော့်​ အားနည်းချက်​​ကြောင့်​ပါ..
Credit by... အောင်ဇေပိုင်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/26/2017 11:13:00 pm0comments
မီတာတိုင်းနည်းလေးဆက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်-Smd resistor လေးတွေကပတ်လမ်းပေါ်မှာအမဲရောင်အတုံးသေးသေးလေးတွေပါ။digital meter
ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ohm စကေးမှာထားပြီးတိုင်းလို့ ရပါတယ်။ရိုးရိုးမီတာဆိုရင်တော့ohm စကေးကို
Diode မှာဆိုရင်လဲအပေါင်းဖက်အခြမ်းကိုအဖြူရစ်ကလေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊မျဉ်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်
ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။တစ်ခုရှိတာက zener diode နဲ့ resistor ကအရောင်တူနေတတ်ပါတယ်။များ
သောအားဖြင့် resistor လေးတွေကအရွယ်ပိုမိုသေးငယ်ပါတယ်။zenzer diode ကမီတာနဲ့ တိုင်းရင်
တစ်ဖက်ပဲပြပြီး resistor ကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာတူညီတဲ့မျှားတံလေးပြနေမှာပါ။
Coil လေးတွေကိုတော့ပုံမှန်တိုင်းနေကြအတိုင်းပဲတိုင်းလို့ ရပါတယ်။မီတာမှာပြရင်အကြမ်းအားဖြင့်
ကောင်းတယ်လို့ ယူဆနိင်ပါတယ်။အိုင်စီတွေကိုတော့ဘာမီတာနဲ့ မှကောင်းမကောင်းတိုင်းကြည့်လို့ 
မသိနိင်ပါဘူး။သူ့ မှာtransisror,resistor,capacitor, လေးတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး BGA package အနေနဲ့ 
Crystal တွေကိုတော့ digital meter မှာ HZ% ပါရင်တိုင်းလို့ ၇ပါတယ်။အတိအကျမဟုတ်တောင်
Crystal အလုပ် မလုပ်ရင် hz ထွက်မထွက်တိုင်းကြည့်နိင်ပါတယ်။ပတ်လမ်းကိုဗို့ ကြွေးထားဖို့ တော့လိုအပ်ပါတယ်။ hz ဆိုတာကတော့တစ်စက္ကန့် 
မှာ circle တစ်ခုအပြည့်လွဲတဲ့နှုန်းပါ။ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ epc ကလွတ်ပေးထားတဲ့ကြိမ်နှုန်းဟာ
50HZ ပါ။ ဖုန်းထဲပါဝင်တဲ့ CPU,Bluetooth,Wifi,Network ic တွေမှာသက်ဆိုင်ရာကြိမ်နှုန်းတွေ
အသီးသီးရှိကြပါတယ်။အရမ်းမြင့်တဲ့ကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့RF ကြိမ်နှုန်းတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်
တွေကိုဖုန်းအသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်တဲ့ကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်၊သူ့ ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ မျက်စိနဲ့ 
မမြင်နိင်တဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတွေဖြစ်နေတတ်လို့ ပါ။နောက်ပြီး GAS အိုးဖွင့်သုံးနေတဲ့
လက်ရှိ power supply ၀ယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့တန်ဖိုးနဲတဲ့ keypad ဖုန်းအစုပ်လေးတွေနဲ့ 
ယုံကြည်မှုပျောက်ပါတယ်၊သင်တန်းတွေမှာလဲဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ကြရတာပါ၊စတက်တာနဲ့emmc ချက်ခြင်း
လဲနိင်ဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိင်ပါဘူး၊ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့ ဆိုတာနှစ်နဲ့ ချီပြီးလေ့ကျင့်ကြရတာပါ။လက်တွေ့ မှာ
Emmc မလဲနိင်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျစရာမလိုပါဘူး၊သူကအမြဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး၊ဒါပေမယ့်
လုပ်နိင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ power ပိုင်းလောက်ပိုင်ပိုင်နိင်နိင်ပြင်နိင်ရင်လုပ်စားလို့ ရနေပါပြီ။
ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရရင် power ပိုင်းမှာအဓိကစစ်ရမှာ zener diode ပါ၊သူရှော့ကျရင်
Supply နဲ့ ချိပ်လိုက်တာနဲ့ အမ်ပီယာအဆုံးထိတက်ပြီး၊power ထိုးကျသွားပါတယ်။ကိုယ်သိပြီး
Supply ကို0volt ထိလျှော့ချပြီးပတ်လမ်းနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ဗို့ ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတင်ကြည့်လိုက်ရင်
Diode လေးပူနေတာကိုစမ်းကြည့်နိင်ပါပြီ။ diode ကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့အထိရှော့ရှိနေသေးရင်ခုနလိုပဲ
Battery ရဲ့အပေါင်းငုတ်ကနေလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်၊ power ic, wifi ic, back light ic တွေဟာ
တိုက်ရိုက် အပေါင်းဗို့ ရောက်နေတဲ့နေရာတွေပါ။power ပိုင်းအားလုံးကောင်းပြီးခုနကအပိုင်းတွေ
မှာရှော့ရှိရင်လဲ power သေနေမှာပါ။ diagram လေးတွေများများလေ့လာရင်သဘောပေါက်
လာမှာပါ။power ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆရာစိုင်းရေးထားတဲ့ pdf လေးရှိပါတယ်၊အရမ်းကိုကောင်း
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/22/2017 08:17:00 pm0comments
ကျွန်တော်မနေ့ က SAMSUNG download mode ၀င်တဲ့ jig လုပ်နည်းလေးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်၊အားလုံးလဲလုပ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။အခုထပ်ပြီး
ုKindle Fireebook တွေမှာမြန်မာဖောင့်သွင်းရင်း၊ boot lopping ဖြစ်သွားတဲ့အခါ
firmware ပြန်တင်ဖို့ download mode ၀င်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး၊အကြောင်းကတော့
အဲဒီကောင်မှာခုလုပ်ဆိုလို့power button တစ်ခုပဲပါလို့ ပါ။သူ့ ကိုလဲမနေ့ ကလိုပဲ
့hand made လေးလုပ်လို့ ရပါတယ်။သူကတော့ resistor 1kတစ်လုံးနဲ့ usb ခေါင်းအလွတ်တစ်ခုပဲလိုတာပါ။ smaung မှာကအနုတ်လိုင်းနဲ့ 
id လိုင်းကို130k နဲ့ ခွပြီးဆက်သွယ်တာပါ၊ဒီမှာကြတော့ အပေါင်းလိုင်းနဲ့idလိုင်း
ကို 1k တစ်လုံးခံပြီး id ဘက်အခြမ်းကိုခဲအသေဆော်လို့ မရပါဘူး၊ signalလေးတစ်ချက်
တို့ ပေးလိုက်ရင် download mode ထဲရောက်သွားပါမယ်။
ူLG တွေမှာလဲတစ်ခါတစ်၇ံ download mode ၀င်ပေးဖို့ လိုရင်ဒီနည်းနဲ့ ဖြေရှင်း
နိင်ပါတယ်။LG မှာတော့ အနုတ်နဲ့ id ကို56k နဲ့ တပ်ပေးရပါတယ်။
MOTOROLA မှာဆို၇င် အပေါင်းလိုင်းနဲ့ ID ကိုဒါရိုက်ပေါင်းပေးယုံပါပဲ
Sansung ဖုန်းတွေမှာ network unlock ဖြစ်တာကိုဖြေရှင်းတဲ့ z3x box တွေ၇ှိပါတယ်၊
ဈေးကြီးပြီးစပယ်ရာပတ်ဝယ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး၊အဲဒီကောင်တွေမှာဖုန်းနဲ့ box ကို ချိတ်ဆက်တဲ့ cable လေးပြတ်သွားရင်ခုလိုပြန်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ box တွေမှာသုံးတာက Rj45 လို့ ခေါ်တဲ့ဂေါင်းရယ် usb ဂေါင်းရယ်နှစ်မျိုးသုံးကြပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း usb ၇ဲ့ pin 2ကို့Rj45 ရဲ့ pin7&8 ပေါင်းထားပြီး 560k တစ်ခံကာ
ios တွေမှာတော့ DFU mode ကို mother board ပေါ်မှာထည့်သွင်းပေးပြီးသားပါ၊
cable ချိတ် internet ဖွင့် i tune ချိတ်လိုက်ရင် auto လုပ်ပေးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပြန်မျှဝေပေးတာပါ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/22/2017 08:15:00 pm0comments
HUAWEI G730 တွေအားသွင်းရင်းရှော့ဖြစ်ပြီးပါဝါသေသွားရင်
HUAWEI G730 တွေအားသွင်းရင်းရှော့ဖြစ်ပြီးပါဝါသေသွားရင် battery ငုတ်ဘေးက
capacitor လေးရှော့ ဖြစ်တာများပါတယ်။သုံးလေးလုံးလောက်ကြံဖူးတယ်၊မီတာနဲ့ 
အရွယ်အစားနဲနဲပိုကြီးတဲ့ capacitor နဲ့ လဲပေးနိင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဖြုတ်ထားလဲရပေမယ့်၊အမ်ပီယာမတောင့်တာမျိုးဖြစ်တတ်လို့ ပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 8/22/2017 07:58:00 pm0comments
SP Flashtool New Version 2017 (MTK Flash Tool MOD)...
Mi ဖုန်းအားလုံး မြန်မာဖောင့် ထည့်မယ် TTA Mi Font L...